ဗွီဒီယိုနှင့်အသံ | November 2019
Windows7ကို, 8, 10 တချို့ကိုအခမဲ့ video အယ်ဒီတာများကဘာတွေလဲ?
ဗီဒီယိုကိုအယ်ဒီတာ - တိုင်းဖုန်းကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်တဲ့အခါအများကြီးကင်မရာများ, သင်ကိုင်တွယ်ရန်လိုသောပုဂ္ဂလိကဗီဒီယိုနှင့်စတိုးဆိုင်ရှိသည်, အထူးသဖြင့်မကြာသေးခင်ကာလ၌, မာလ်တီမီဒီယာကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်အများဆုံးလိုအပ်သောအစီအစဉ်များထဲကတစ်ခုဖြစ်လာနေသည်။ 7, 8: ဤဆောင်းပါး၌ငါနောက်ဆုံးပေါ် operating system ကို Windows အတွက်အခမဲ့ video အယ်ဒီတာကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။
AliEkspress နှင့်အတူ 10 ဦးကိုအကောင်းဆုံးခရီးဆောင်ပီ
စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, လက်တော့ပ်များနှင့်အခြား "Smart" gadgets features တွေအများကြီးရှိသည်, ဒါပေမယ့်ကြောင့်သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကွဲပြားခြားနားနားကြပ်မှတဆင့်ထက်ဂီတကိုနားထောင်ဘို့ fit ခဲ့ပါဘူး။ built-in စပီကာက high-quality, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အသံကျယ်သောအသံများကိုသေးငယ်လွန်းဖြစ်ကြသည်။ ဒီဖြေရှင်းချက်စက်ပစ္စည်း၏မိုဘိုင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကနေ detract ပါဘူးတဲ့ခရီးဆောင်ပီဖြစ်နိုင်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောဖိုလ်ဒါထဲမှာအတူတူဂီတဖိုင်များကို။ အဘယ်သို့ငါအကြိမ်ကြိမ်ပုဒ် delete သလဲ?
နေ့သည်ကောင်းသော။ သင်ပင်ဂိမ်းများ, ဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, လူကြိုက်အများဆုံးနေသောဖိုင်များကိုသိသလား ဂီတ! ဒါကဂီတခြေရာခံ - ဤကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖိုင်တွေဖြစ်ကြသည်။ နှင့်အံ့ဩစရာမရှိ, ဂီတမကြာခဏအလုပ်လုပ်နှင့်အပန်းဖြေဖို့ညှိဖို့ကူညီပေးသည်နှင့်ပတ်လည်မလိုချင်တဲ့ဆူညံသံအနေဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ရုံအာရုံ (နှင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးမလိုတော့ဘူးအတှေးအထဲကနေ :)) လို့ပဲ။
အားလုံးအခါသမယများအတွက်အသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ YouTube ကိုများစွာ
လူသန်းပေါင်းများစွာ YouTube ကို၏တက်ကြွသောအသုံးပြုသူများကိုဖြစ်ကြသည်။ ဖော်ပြထားသည်ဗီဒီယို hosting အတွက်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရဆုံးအဆင်ပြေစေ tools များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကိုနှင့်ပြည့်စုံသည်။ ဒါပေမယ့်လည်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အချို့ဝှက်ထားသော features တွေပါရှိသည်။ ကျနော်တို့ကိုအလွန်ဘဝ videoblogeru ရိုးရှင်းနိုင်သောအသုံးဝင်သော features တွေတစ်ရွေးချယ်ရေးဆက်ကပ်။
ဂိမ်းများကိုမှဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက်ထိပ်တန်း 10 ဦးကိုအကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များ
နေ့သည်ကောင်းသော။ အစဉ်အဆက်ကကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားသူကိုလူတိုင်းနီးပါးကဗီဒီယိုအပေါ်အချို့သောအချိန်လေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အခြားကစားသမားသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုပြသချင်တယ်။ ဤသည်တာဝန်အတော်လေးရေပန်းစားသည်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူနှငျ့ရငျဆိုငျနေကြတယ်, မကြာခဏခဲဖြစ်နိုင်သိတယ်: ဗီဒီယိုနှေးကွေးခြင်း, ပြဇာတ်မှတ်တမ်းတင်ကာလအတွင်းဖြစ်နိုင်ခြေမရှိ, အသံများ၏အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းဒါအပေါ်ကြားလျှင်, မရနိုင်ပါ။
ဘယ်လို (သင့်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဂီတမှ) တစ်ဆလိုက်ရှိုးကိုဖန်တီးရန်
မင်္ဂလာပါ မွေးနေ့, မင်္ဂလာဆောင်, နှစ်ပတ်လည်နှင့်အခြားအရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်များ: လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးနှင့်အမှတ်ရစရာဓါတ်ပုံရှိပါတယ်။ သို့သော်ဤဓာတ်ပုံများကို TV ပေါ်မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်သောအပြည့်အဝဆလိုက်ရှိုးပြုပါသို့မဟုတ်လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများကို upload တင်လို့ရပါတယ်။ Network မှ (သင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းပြသ) ။ 15 နှစ်အကြာလြှငျ, အရည်အသွေးမြင့်ဆလိုက်ရှိုးကိုဖန်တီးရန်ကိုသိရဖို့လုံလောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်အသိပညာတစ်ခုလျောက်ပတ်သော "အိတ်ကို" ရှိသည်နှင့်အစီအစဉ်များ၏စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်ခဲ့ရသည်။
ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံး quadrocopter ကင်မရာ 2018
ဝေဟင်ဓာတ်ပုံများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံပါသို့မဟုတ်ဝေဟင်သို့မြင့်တက်ဖို့သေချာပေါက်မဟုတ် aerovideosomkoy ရန်။ ခေတ်သစ်စျေးကွက်စာသားကိုလည်း quadrocopter ဟုခေါ်ကြသည်ထားတဲ့အရပ်သားမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များနှင့်အတူလျှံနေသည်။ စျေးနှုန်း, ထုတ်လုပ်သူများနှင့် device ကိုအတန်းအစားပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့တစ်တွေရိုးရှင်းသောအလင်းအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုသို့မဟုတ် Full-စုံတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ထားကြသည်။
မင်္ဂလာပါ ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးအလုပ်များကိုတစ်ခုမှာ - က (စသည်တို့ကိုအသံ, ဗီဒီယို,) မီဒီယာဖိုင်ကစားနေသည်။ နှင့်ဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး, ကွန်ပျူတာနှေးကွေးမှစတင်ခဲ့သည်: ကစားသမားအတွက် image ကို twitching, spurts အတွက်ကစား, "ထစ်" သံကိုစတင်နိုင်သည် - ရုံဤကိစ္စတွင်အတွက်ဗီဒီယို (ဥပမာ, ရုပ်ရှင်) watch ငါချင်ပါတယ်ဒီသေးငယ်တဲ့ဆောင်းပါးမှာတော့ ... ရိုးရှင်းစွာမဖြစ်နိုင်ဘူး သင့်ရဲ့ PC ကို + ၎င်းတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဗီဒီယိုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်အရာများအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းအားလုံးစုဆောင်းပါ။
တောင်မှတချို့လွန်ခဲ့တဲ့ 10 နှစ်လောက်ကတည်းကဆဲလ်ဖုန်းတစ်ခုစျေးကြီး "ကစားစရာ" ကြီးပျမ်းမျှအထက်ဝင်ငွေနှင့်အတူလူတို့အဘို့ပြုလုပ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ လက်ရှိတစ်နေ့လျှင်ဖုန်းမှာ - ကဆက်သွယ်ရေးတစ်ခုနည်းလမ်းဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့် (7-8 နှစ်ကထက်အသက်ကြီးတဲ့သူ) အားလုံးနီးပါးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရသာရှိပါတယ်မဟုတ်, လူတိုင်းအတွက်သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ default ဖိုင်အသံ likes ။
ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနှင့်ဝသကဲ့သို့နှင့်မျက်နှာပြင်တည်းဖြတ် (1 2)
နေ့သည်ကောင်းသော။ "ဒါဟာတစ်ချိန်ကအဆတရာသောစကားကိုနားထောင်ထက်ကြည့်ဖို့ သာ. ကောင်း၏" - ဒီတော့စကားပုံကပြောပါတယ်။ နှင့်ငါ့အမြင်အတွက်ကြောင့် 100% မှန်ကန်ဖြစ်ပါတယ်။ (ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာသကဲ့သို့, ရှင်းလင်းချက်နှင့်အတူသို့မဟုတ် screenshots များ) ကမိမိအဗွီဒီယိုကိုမျက်နှာပြင်ကနေသူ့ကိုမှရေးသားခြင်းအားဖြင့်ဥပမာအားဖြင့်ပြုပုံကိုဖေါ်ပြခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, desktop ပေါ်မှာမှရှင်းပြဖို့တကယ်တော့, အမှုအရာတွေအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူ။
အတော်များများကအသုံးပြုသူများသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပြီဘယ်လိုသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြတ်ဖို့, အဘယျသို့အစီအစဉ်များကိုအဘယ် format နဲ့ငါဒါဟာမကြာခဏဂီတဖိုင်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးဖျော်ဖြေပွဲမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်လျှင်, ကိုယ့်တဦးတည်းသီချင်းရှိသည်ဖို့အပိုင်းပိုင်းဖြတ် ... မကယ်သင့်တယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုပြဿနာကို (ဒီနေရာမှာ, သင်တန်း, ကအစားကတည်းဖြတ်ထက်သာဖိုင်ကိုတိအကြောင်း) ကိုအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။
မင်္ဂလာပါ ဒါဟာတစ်ချိန်ကဒါကပေါ်ပြူလာစကားပုံသွားသည်နှင့်ဖြစ်ကောင်းမှန်ကန်စွာဒါရဲ့🙂အဆတရာသောစကားကိုနားထောင်ထက်ကြည့်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။ သငျသညျအစဉျအမွဲကဗီဒီယို (သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကို) ၏အသုံးပြုမှုကိုပြင်, PC အတွက်အချို့သောလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်ဖို့ဘယ်လိုတစ်စုံတစ်ဦးမှရှင်းပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ဖူးပါသလော သင်ရုံအဘယျသို့အဘယ်မှာနှိပ်ပါ၏ "လက်ချောင်းများ" ကိုရှင်းပြပါလျှင် - သင်လူ 100 ထဲက 1 နားလည်လိမ့်မည်!
နေ့သည်ကောင်းသော။ ဗီဒီယိုကိုအတူလုပ်ကိုင် - ဒီအထူးသဖြင့်မကြာသေးခင်ကာလ၌, လူကြိုက်အများဆုံးအလုပ်များကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည် (နှင့်ပါဝါတက် PC ကိုဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ processing များအတွက်နှင့်ဗီဒီယိုကင်မရာများလုပ်ပေးအသုံးပြုသူကျယ်ပြန့်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာကြပါပြီ) ။ ဒီဆောင်းပါးအတိုခုနှစ်တွင်ငါသည်သင်တို့ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသင်အကြိုက်ဆုံး video file ကိုအပိုင်းအစများအထဲကဖြတ်နိုငျပုံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားချင်တယ်။
ဗီဒီယိုတစ်ကားကို 90 ဒီဂရီလှည့်ဖို့လျင်မြန်စွာအယ်ဒီတာ
ဖုန်းပေါ်တွင်တောက်ပသောအချက်ကိုဖမ်းယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတှငျကြှနျုပျတို့ခဲရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာကင်မရာ၏အနေအထားကိုစဉ်းစားပါ။ ထိုအခါတကယ်တော့ပြီးနောက်ကျွန်တော်ကုန်ကျမည်ဟုအဖြစ်မဟုတ်ဘဲအလျားလိုက်ထက်ဒေါင်လိုက်ကကျင်းပကြောင်းလေ့လာပါ။ ကစားသမားနှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်အနက်ရောင်အစင်းသို့မဟုတ်ပင်ဇောက်ထိုးပုံစံနှင့်အတူဤအဗီဒီယိုများဆုံးရှုံးမကြာခဏရိုးရှင်းစွာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ကိုစောင့်နေကြလော့။
ကွန်ပျူတာဒါမှမဟုတ်ဖုန်းပေါ်ရှိ VC ကိုထံမှဂီတကို download လုပ်လုပ်နည်း
VKontakte - လူကြိုက်အများဆုံးလူမှုကွန်ယက်၏တဦးတည်း။ ထိုအကြှနျုပျတို့ရှိသမြှအဘယ်ကြောင့်သင်တို့သိကြ၏။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သငျသညျ send and receive မက်ဆေ့ခ်ျများ, နှစ်ဦးစလုံးကိုယ်နှိုက်နှင့်မိတ်ဆွေများအဘို့, ဗီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုအဖြစ်အသံနားထောင်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဖုန်းပေါ်မှာဂီတကိုကယ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်? ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ထိုကဲ့သို့သော function ကို developer များ site ကိုပေးမထားပါ။
သင့်ရဲ့ PC ကိုမှ Youtube ကိုကနေဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ပညာရှင်ပီသစွာမကြာမီကရုပ်ရှင်နမူနာအပေါင်းတို့, မျိုးနှင့်အရွယ်အစား၏ဖျံ, ပျော်စရာအမျိုးမျိုး, အိမ်လုပ်ကာတွန်းနှင့်ဗီဒီယိုများကိုဖန်ဆင်းတော် - ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို၎င်းကျယ်ပြန့် YouTube ကိုတှငျတှေ့နိုငျပါသညျ။ ဝန်ဆောင်မှုနှစ်အတွင်းမှာတော့အွန်လိုင်းမီဒီယာဈေးကွက်ထဲမှာကြီးမားတဲ့အဓိကကစားသမားမှပေါ်တယ် "ဟုအဆိုပါအဘို့" ရိုးရှင်းသော hosting အတွက် roller ကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့သည်။
နှင့်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ: ဤဆောင်းပါး၌အကြှနျုပျတို့သညျကိုဗီဒီယိုဖိုင် Format AVI ဖြတ်အဖြစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်အများအပြားရွေးချယ်စရာနိုငျပုံကိုခြေလှမ်းနေဖြင့်ခြေလှမ်းစဉ်းစားပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အစီအစဉ်များကိုများစွာလျှင်မရထိုကဲ့သို့သော task အတွက်ဖြေရှင်းချက်ရာပေါင်းများစွာရှိပါသည်။ သို့သော်၎င်း၏မျိုးရဲ့အကောင်းဆုံးများထဲမှ - တစ် VirtualDub ။ VirtualDub - AVI ဗီဒီယိုဖိုင်များ processing များအတွက်ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့သည်ကောင်းသော။ ရုံ Unreal - ဗီဒီယိုမရှိဘဲအိမ်မှာကွန်ပျူတာမိတ်ဆက်ယနေ့တွင်! ထိုအခါကွန်ယက်တွင်တွေ့ရှိခဲ့သောဗီဒီယိုကလစ်ပ်၏ပုံစံ - များစွာ (အနည်းဆုံးလူကြိုက်အများဆုံး)! ထို့ကြောင့်, တယောက်ကိုတယောက် format နဲ့မှဗီဒီယိုနှင့်အသံ converting ၏စစ်ဆင်ရေး - 10 လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းသက်ဆိုင်ရာခဲ့, ယနေ့သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပြီးသေချာများအတွက်သက်ဆိုင်ရာ 5-6 နှစ်ကဖြစ်လိမ့်မည်။
မင်္ဂလာပါ ယနေ့ဝဘ်ကင်မရာအားလုံးနီးပါးခေတ်သစ် Laptop, netbook များ, တက်ဘလက်ရှိပါတယ်။ စာရေးကိရိယာ PC များထဲကအတော်များများပိုင်ရှင်တွေလည်းဒီအသုံးဝင်သောအရာတယ်ပါပြီ။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်ဝဘ်အခန်းထဲကအင်တာနက်ကိုကျော်စကားစမြည် (ဥပမာ, Skype ကို) အတွက်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်တစ်ဦးကို web ကင်မရာများ၏အကူအညီဖြင့်, သင်သည်ဥပမာ, ဗွီဒီယိုတစ်ခုမက်ဆေ့ခ်ျကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းသို့မဟုတ်နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်စံချိန်တင်စေနိုင်သည်။
AliEkspress အပေါ်အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည့်ကြိုးမဲ့နားကြပ်, 10 မော်ဒယ်များ
သငျသညျဝါယာကြိုးများနှင့်အတူထာဝရပျော့သွားတာကိုငြီးငွေ့များမှာလျှင်, သင်အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်အကြိုက်ဆုံးဂီတကိုခံစားချင်, တကအရည်အသွေးမြင့်ကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုဝယ်ယူစဉ်းစားရန်အချိန်ပါပဲ။ ထိုအခါအကောင်းဆုံးကြိုးမဲ့နားကြပ် Aliekspress ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ကူညီဖို့သူတို့အဘို့အပေးဆောင်ကြပါဘူး။ မာတိကာ 10. Moloke IP011 - 600 ရူဘယ်9။
https://termotools.com my.termotools.com © ဗွီဒီယိုနှင့်အသံ 2019